Istanbul Metro ayaa daabacday 65 milyan 200 kun oo rakaab ah bishii Diseembar | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulIstanbul Metro ayaa daabacaysa 65 milyan 200 kun oo rakaab ah bishii Diseembar
13 / 02 / 2020 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, HAY'ADAHA, Headline, Gobolka Marmara, Metro, Metro Istanbul, TURKEY
Jidadka tareenka ee magaalada Istanbul ayaa qaadaya milyan oo rakaab ah bishii Diseembar
Dhibcaha Bandhigga Ganacsiga ee Magaalada Istembaal 2019 waa la daabacay. Marka loo eego, marinnada tareenka ee Istanbul waxay qaadeen 844 duulimaad oo ay wataan 153 baabuur bishii Diseembar waxayna qaadeen 495 milyan 65 kun oo rakaab ah.
operator tareenka ee ugu weyn dalka Turkiga ayaa magaalada Istanbul degmada Metropolitan ee kabista Istanbul ee Metro sii wadaan in ay macluumaadka la wadaago İstanbullular'l la hufan oo lala xisaabtami karo faham degmada. Dhibcaha Qiimaynta Howlqabadka ee Shirkadda ee Diseembar 2019 ayaa la daabacay.
Tirada Rakaabka ayaa kordhay 2018 milyan 3 kun marka loo barbar dhigo 900
Sida ku xusan sidan; Bishii Disembar ee sanadka 2019-ka, 158 baabuur iyo 844 kun 153 duulimaad ayaa laga fuliyay 495 saldhig oo ku yaal magaalada tareenka ee Istanbul. Tirada duulimaadyadu waxay ahaayeen 148 isla waqtigaas oo kale sanadkii hore. Gawaarida ku safraya 500 milyan kiilo mitir bishii Diseembar 2018 waxay gaareen 8.2 milyan oo kiiloomitir isla bishaas sannadkan. Dadaaladaas awgood, tirada rakaabka, oo ahayd 8.4 milyan 2018 kun bishii Diseembar 61, waxay kordheen bishii Diseembar 300 waxayna gaareen 2019 milyan 65 kun.
Tirada Duulimaadyada La Xaqiijiyay Waqtiga ayaa ka sarreeya celceliska
Sida ku xusan warbixinta waxqabadka ee Metro Istanbul, 2019 boqolkiiba duulimaadyada ayaa dhacay Diseembar 98.91. Nova-Comet, oo ah hay'ad bartilmaameedka caalamiga ah oo 5 metros oo kuyaal 38 qaaradood ay xubno ka ahaayeen, ayaa celcelis ahaan duulimaadkeedu ahaa 95.1 boqolkiiba.
Waqtiga looga jawaabayo cabashada rakaabka ee la bartilmaameedsaday 5 maalmood waxay ahayd 2.5 maalmood. Iskucelcelinta soo laabashada cabashadii uu soo bandhigay Nova-Comet waxay ahayd ugu badnaan 10 maalmood. Marka loo eego xogta ku jirta warbixinta waxqabadka, tirada dhacdooyinka 2019 milyan oo rakaab ah bishii Diseembar 1 waxay ahayd celcelis ahaan Nova-Comet 4, halka tirada Metro Istanbul ay gaartay 2.3.
Qiimaynta Bandhiga Ganacsiga ee Metro Istanbul ee Diseembar 2019 Riix halkan
Hawlaha Mashruuca Dhismaha Magaalada Ankara waa kuwo socda (M2) iyo (M3)…
2 Million 200 Isticmaalida Codsiyada EGO ee Mobile-ka ee Koonfur-Galbeed
3 Million 750 Kun oo Lakuliyay Rugta Looga Dhawaaqay Ramadaanka
Xerada Olympos 200 kun ayaa u soo guuray ugu sarraysa
Mashruuca iyo daraasadda qiyaasta qiyaasta qiyaasta ee ku taal Ankara Metro (M2) iyo (M4)…
TCDD Ankara - Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Istanbul 200 acak